कात्तिक १३, काठमाडौं । साताको अन्तिमदिन बिहीवार नेप्से परिसूचक १ हजार ६४५ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से १ दशमलव ७८ अंकले घटेको हो । बिहीवारको कारोबार दिनमा १९२ ओटा कम्पनीको १ करोड ३ लाख ६५ हजार ६०७ कित्ता शेयर ४१ हजार ९० पटकमा रू. ३ अर्ब ३ करोड ७६ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
बिहीवारको कारोबारमा आएका १९ ओटा कम्पनीमध्ये ७९ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७७ ओटा कम्पनीको घटेको छ । त्यसैगरी १३ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।
बिहीवारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार दोस्रो बजारमा कारोबार भएको पहिलो दिनमै कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १२० मा खुला भएकोमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. १३२ पुगेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाल फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये व्यापार समुहको परिसूचक १ दशमलव ३७ प्रतिशत, जलविद्युत् समुहको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समुहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, लघुवित्त समुहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, जीवन बीमा समुहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र अन्य समुहको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने बाँकी समुहको परिसूचक घटेको छ ।
बैंकिङ समुहको परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त समुहको परिसूचक बुधवार भने बढेको थियो । उक्त समुहको कम्पनीको शेयर मूल्य बढेसँगै प्रोफिट बुक गर्न लागेसँगै यस समुहको परिसूचक घटेको देखिन्छ ।
बिहीवारको कारोबार दिनमा सर्वाधिक कारोबार गर्ने टपटेनमा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल बैंकको रू. १३ करोड ७८ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण यसतर्फ बढेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको संस्थापक शेयर ३ दशमलव ९७ प्रतिशत घटेको छ । बुधवारको तुलनामा बिहीवार कारोबार रकम भने वृद्धि भएको छ । बुधवार रू. २ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको थियो ।
तेस्रो घण्टामा ३०.१० अंकले बढ्यो नेप्से, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सर्वाधिक कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १५]
२.९७ अंकले बढेको बजारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य १०% ले वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १५]